Ch 13 John – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaJohani / Ch 13 John
13:1 Pamberi pamutambo wepaseka, Jesu aiziva kuti nguva yakanga kuswedera apo aizopfuura kubva munyika ino aende kuna Baba. Uye sezvo akanga achida vake avo vakanga vari munyika, wakavada kusvikira pamagumo.
13:2 Zvino kudya padzakaitika, Dhimoni rakati zvino mumwoyo maJudhasi Iskariyoti, mwanakomana waSimoni, kuti amutengese,
13:3 Kuziva kuti Baba vakanga vaisa zvinhu zvose mumaoko ake, uye kuti akanga abva kuna Mwari uye kuti akanga achienda kuna Mwari,
13:4 akasimuka kubva kudya, uye akaisa parutivi nguo dzake, uye wakati agamuchira tauro, akauputira kumativi pachake.
13:5 Next akaisa mvura kudzika mbiya, uye akatanga kugeza tsoka dzevadzidzi uye kuvaparadza netauro zvaakanga akaputirwa.
13:6 Zvino akasvika kuna Simoni Petro. Zvino Petro akati kwaari, "Ishe, kuti iwe tsoka dzangu?"
13:7 Jesu akapindura akati kwaari: "Zvandiri kuita, haufaniri ikozvino kunzwisisa. Asi muchazvinzwisisa pashure. "
13:8 Petro akati kwaari, "Imi hamufaniri kushambidza tsoka dzangu!"Jesu akamupindura, "Kana ndikasakushambidza iwe, hamuna nzvimbo neni. "
13:9 Simoni Petro akati kwaari, "Ipapo Ishe, tsoka dzangu kwete chete, asiwo maoko angu nomusoro!"
13:10 Jesu akati kwaari: "Uyo akashambidza havafaniri chete tsoka dzake, uye ipapo achava akachena zvachose. Uye imi makachena, asi kwete mose. "
13:11 Nokuti aiziva nderipi aizomupandukira. Nechikonzero ichi, akati, "Hamuna kuchena mose."
13:12 uye saka, pashure akageza tsoka dzavo uye akagamuchira nguvo dzake, wakati agere pakudya zvakare, akati kwavari: "Unoziva zvandaita kwamuri?
13:13 Muchinditi Mudzidzisi uye Ishe, uye iwe taura zvakanaka: nokuti ndiri.
13:14 saka, kana ini, Ishe wenyu noMudzidzisi, ndashambidza tsoka dzenyu, nemiwo munofanira kugezana tsoka mumwe.
13:15 Nokuti ndakupai muenzaniso, zvokuti sezvo zvandakaitira iwe, saizvozvowo Unofanira kuita.
13:16 Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, muranda haasi mukuru Ishe wake, uye muapostora haasi mukuru kupfuura amutuma.
13:17 Kana iwe kunzwisisa izvi, iwe Ucharopafadzwa kana iwe achazviita.
13:18 Handisi kutaura pamusoro penyu mose. Ndinoziva avo vandakasarudza. Asi ichi ndicho kuitira kuti Rugwaro ruzadziswe, 'Uyo anogovana neni chingwa neni achasimudza chitsitsinho chake kuzorwa neni.'
13:19 Uye ndinokuudzai izvi ikozvino, zvisati zvaitika, zvekuti kana zvakaitika, mugotenda kuti ndini.
13:20 Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, anogamuchira munhu vandinotuma, unogamuchira ini. Uye ani nani unogamuchira ini, anogamuchira uyo akandituma. "
13:21 Apo Jesu ataura izvi, akatambudzika mumweya. Uye akapupura achiti: "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, kuti pakati penyu uchanditengesa. "
13:22 saka, Vadzidzi akatarisa mumwe, zivikanwa pamusoro paani.
13:23 Uye akazendamira pamusoro pachifuva chaJesu aiva mumwe wevadzidzi vake, uya aidikanwa naJesu.
13:24 saka, Simoni Petro akaninira iyeyu, akati kwaari, "Ndianiko ari kutaura pamusoro?"
13:25 uye saka, akazendamira pachipfuva chaJesu, akati kwaari, "Ishe, ndiani?"
13:26 Jesu akapindura, "Ndiye ndichava kungapfuurira uyo ndokunyika chingwa." Zvino aseva chingwa, akachipa kuna Judhasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni.
13:27 Zvino shure kwechimedu, Satani akapinda maari. Zvino Jesu akati kwaari, "Zvauri kuita, kurumidzai kuita. "
13:28 Hapana avo vagere pakudya wakaziva kuti ambotaura naye.
13:29 Nokuti vamwe vakanga vachifunga kuti, nekuti Judhasi akatamba chikwama, kuti Jesu akanga audzwa, "Tenga zvinhu izvo zvinodiwa nesu pamutambo,"Kana kuti ape chimwe chinhu vanoshaya.
13:30 saka, wakati akabvuma musuva, akabuda pakarepo. Uye hwaiva usiku.
13:31 ndokubva, Wakati abuda, Jesu akati: "Zvino Mwanakomana womunhu wakudzwa, uye Mwari akudzwa maari.
13:32 Kana Mwari akudzwa maari, ipapo Mwari uchamukudzawo maari pachake, uye achamukudza pakarepo.
13:33 Little vanakomana, kwenguva yakati, Ndinewe. Unofanira kunditsvaka, uye sokutaura kwandakaita kuvaJudha, 'Kwandinoenda, usingakwanisi kuenda,'Saizvozvowo ndinoti kwamuri ikozvino.
13:34 Ndinokupai murayiro mutsva: Kudanana. Sezvo ndakakudai, saizvozvowo anofanira mudanane.
13:35 By ichi, zvose unofanira kuziva kuti muri vadzidzi vangu: kana mune rudo umwe kune umwe. "
13:36 Simoni Petro akati kwaari, "Ishe, uri kuenda kupi?"Jesu akapindura: "Kwandinoenda, iwe havagoni kunditevera ikozvino. Asi munofanira kutevera pashure. "
13:37 Petro akati kwaari: "Sei ndiri vasingakwanisi kukutevera ikozvino? Ndichakufirai upenyu hwangu kwamuri!"
13:38 Jesu akamupindura: "Muchava akarara pasi upenyu hwako ini? Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, Jongwe harizoriri, kusvikira iwe uchandiramba katatu. "